Hery Natao Hamoronana: Ilay “Nanao ny Lanitra sy ny Tany” | Manatòna
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Baoulé Bengali Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Géorgien Haoussa Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kambôdzianina Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Niue Norvezianina Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Rarotonga Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tsonga Twi Umbundu Uruund Venda Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Hery Natao Hamoronana: Ilay “Nanao ny Lanitra sy ny Tany”
1, 2. Nahoana ny masoandro no mampiseho ny hery namoronan’i Jehovah?
INONA no mitranga rehefa mitanina afo ianao amin’ny alina mangatsiaka? Mipetraka eo amin’ny toerana mety tsara ianao, mba hahazo hafanana tsara. Tsy ho zakanao ilay hafanana, raha akaiky loatra ianao. Hangatsiaka indray ianao, raha lavitra loatra an’ilay afo.
2 Misy “afo” manafana ny hoditsika isan’andro. Mirehitra any amin’ny 150 tapitrisa kilaometatra lavitra antsika izy io! * Tena mahery tokoa ny masoandro matoa tsapanao ny hafanany avy any lavitra be toy izany! Mihodidina an’io afo io anefa ny tany, ary mety tsara ny elanelany. Ho lasa etona ny rano eto an-tany, raha akaikiny loatra ny masoandro. Hivaingana kosa ny zava-drehetra, raha lavitra loatra izy. Tsy ho azo iainana ny tany raha ireo no mitranga. Tena ilain’ny zavamananaina eto an-tany ny hazavan’ny masoandro, ary sady madio no mahery sy tena mahafinaritra izy io.—Mpitoriteny 11:7.
Jehovah “namboatra ny fanazavana, indrindra fa ny masoandro”
3. Inona no fahamarinana lehibe porofoin’ny masoandro?
3 Heverin’ny olona ho toy ny zava-mahazatra fotsiny anefa ny masoandro, na dia miankina amin’io aza ny ainy. Tsy takatr’izy ireo, noho izany, ny zavatra ampianarin’ny masoandro antsika. Hoy ny Baiboly, momba an’i Jehovah: “Hianao namboatra ny fanazavana, indrindra fa ny masoandro.” (Salamo 74:16) Manome voninahitra an’i Jehovah, ilay “nanao ny lanitra sy ny tany”, tokoa ny masoandro. (Salamo 19:1; 146:6) Ny masoandro dia iray monja amin’ireo zavatra eny amin’ny lanitra izay mampianatra antsika momba ny hery lehibe amoronan’i Jehovah. Andeha hodinihintsika akaiky kokoa ny sasany amin’izy ireny, ary avy eo hojerentsika ny tany sy ny zavamiaina eo aminy.
“Asandrato ny masonareo, ka mijere”
4, 5. Manao ahoana ny hery sy ny haben’ny masoandro, nefa manao ahoana izy raha ampitahaina amin’ny kintana hafa?
4 Fantatrao angamba fa kintana ny masoandro. Toa lehibe kokoa noho ny kintana hafa hita amin’ny alina ny fahitana azy, satria akaikintsika izy io. Manao ahoana ny heriny? Misy 15 000 000 degre eo ho eo ny hafanan’ny atin’ny masoandro. Andeha hatao hoe afaka maka sombiny toy ny loham-panjaitra monja amin’io atin’ny masoandro io ianao, ka mametraka izany eto an-tany. Any amin’ny 140 kilaometatra miala amin’izy io ianao vao tsy ho may! Mamoaka hery mitovy amin’ny fipoahan’ny baomba ataomika an-jato tapitrisa ny masoandro, isaky ny iray segondra.
5 Lehibe tokoa ny masoandro, ka antonona planeta 1 300 000 mitovy habe amin’ny tany ao anatiny. Kintana tena lehibe ve ny masoandro? Tsia, fa kintana kely miloko mavo fotsiny no iantsoan’ny manam-pahaizana azy. Nilaza ny apostoly Paoly fa “ny kintana anankiray dia hafa voninahitra noho ny kintana anankiray.” (1 Korintiana 15:41) Tsy fantany ny tena fahamarinan’ireo teny ara-tsindrimandry ireo. Misy kintana tena lehibe mihitsy, ka raha apetraka eo amin’ny toeran’ny masoandro izy, dia ho lasa ao anatiny ny tanintsika. Ho tonga hatrany amin’ny planeta Saturne mihitsy ny kintana lehibe iray hafa apetraka eo amin’ny toeran’ny masoandro toy izany. Tena lavitra be ny tany anefa no misy an’i Saturne, ka afaka efa-taona ny sambon-danitra vao ho tonga eny, na dia avo 40 heny noho ny fandehan’ny balan’ny basy mahery vaika aza ny hafainganam-pandehany!
6. Ahoana no ampisehoan’ny Baiboly fa tsy voaisan’ny olona ny kintana?
6 Mbola mampitolagaga kokoa noho ny habeny ny isan’ny kintana. Toa milaza mihitsy ny Baiboly fa tsy hita isa, toy ny “fasika any amin’ny ranomasina”, ny kintana. (Jeremia 33:22) Milaza izany fa tsy ireo kintana tazan’ny maso ihany no kintana misy. Raha tena niandrandra sy nanisa ny kintana hitany tokoa ny mpanoratra ny Baiboly toa an’i Jeremia, dia ho kintana telo arivo monja no ho voaisany, satria izay ihany no ho hitan’ny mason’ny olona amin’ny alina tsy semban-drahona. Mitovitovy amin’ny isan’ny fasika iray tanana izany. Mitovy amin’ny fasiky ny ranomasina anefa ny isan’ny kintana, raha ny tena izy. * Iza no ho afaka hanisa izany?
“Miantso azy rehetra amin’ny anarany avy” Izy
7. a) Firy eo ho eo ny isan’ny kintana ao amin’ny Voie lactée, ary tena betsaka ve izany? b) Nahoana no mendri-komarihina ny hoe tsy voafaritry ny manam-pahaizana ny isan’ny vahindanitra, ary inona no ampianarin’izany antsika momba ny hery namoronan’i Jehovah?
7 Mamaly toy izao ny Isaia 40:26: “Asandrato ny masonareo, ka mijere; iza no nahary ireny? Izy no mamoaka ny antokony araka ny isany sy miantso azy rehetra amin’ny anarany avy.” Hoy ny Salamo 147:4: “Milaza ny isan’ny kintana Izy.” Firy ny “isan’ny kintana”? Sarotra ny mamaly izany. Milaza ny manam-pahaizana fa mety hisy kintana maherin’ny 100 000 tapitrisa amin’ny vahindanitra Voie lactée misy antsika fotsiny. * Iray monja amin’ireo vahindanitra maro be anefa ny vahindanitra misy antsika, ary mbola misy kintana maro lavitra aza ny vahindanitra sasany. Ary firy ny isan’ny vahindanitra? Misy manam-pahaizana milaza hoe mety ho 50 000 tapitrisa. Misy milaza hoe mety ho 125 000 tapitrisa. Tsy fantatry ny olona, araka izany, ny tena isan’ny vahindanitra, koa mainka moa fa ny isan’ireo kintana an’arivo tapitrisa ao amin’izy ireny! Fantatr’i Jehovah kosa ny isan’ny kintana, ary antsoiny amin’ny anarany avy izy ireny!
8. a) Hazavao ny mombamomba ny halehiben’ny vahindanitra Voie lactée. b) Ahoana no ifehezan’i Jehovah ny fihetsehan’ireo zavatra eny amin’ny lanitra?
8 Vao mainka isika matahotra sy manaja an’i Jehovah, rehefa mahafantatra ny haben’ireo vahindanitra. Afaka mandeha 300 000 kilaometatra isan-tsegondra ny hazavana. Eritrereto fa afaka 100 000 taona vao hahatety ny vahindanitra misy antsika ny hazavana! Ary misy vahindahitra mbola lehibe lavitra noho ny vahindanitra misy antsika. Lazain’ny Baiboly fa “mamelatra ny lanitra” toy ny lamba azo itarina i Jehovah. (Salamo 104:2) Izy koa no mandamina ny fivezivezen’ireo zavatra noforoniny ireo. Mihetsika araka ny lalàna fizika napetrak’Andriamanitra ireo zavatra eny amin’ny lanitra, manomboka amin’ny kely indrindra, ka hatramin’ny lehibe indrindra. (Joba 38:31-33) Nampitahain’ny mpahay siansa amin’ny dihy mirindra, araka izany, ny fihetsehan’ireo zavatra eny amin’ny lanitra! Eritrereto àry Ilay namorona azy ireny. Tsy talanjona ve ianao manoloana ilay Andriamanitra manana hery namoronana toy izany?
“Ilay nanao ny tany tamin’ny heriny”
9, 10. Hazavao ny fisehoan’ny hery namoronan’i Jehovah, eo amin’ny masoandro sy ireo planeta mihodidina azy, i Jupiter, ny tany ary ny volana.
9 Miharihary eto amin’ny tany fonenantsika ny hery namoronan’i Jehovah. Napetrany tsara eto amin’izao rehetra izao tena lehibe ny tany. Misy mpahay siansa milaza fa maro ny vahindanitra tsy mety ho an’ny planeta misy zavamananaina toy ny tany. Hita fa tsy natao hiainana ny tapany lehibe amin’ny vahindanitra Voie lactée misy antsika. Feno kintana eo afovoan’izy io. Mahery ny taratra niokleary eo amin’izany, ary mifanena akaiky kely matetika ireo kintana. Tsy misy an’ireo zavatra ilain’ny zavamananaina ny sisin’ny Voie lactée. Eo afovoan’izany rehetra izany no misy ny masoandro sy ireo planeta mihodidina azy.
10 Arovan’ny planeta Jupiter koa ny tany. Lavitra azy izy io, nefa lehibe, satria avo arivo henin’ny haben’ny tany ny habeny. Manana hery misintona lehibe izy io. Inona no vokany? Sintoniny, na aviliny lalana, ireo zavatra manidina eny ambony eny. Milaza ny mpahay siansa fa ho avo 10 000 heny ny herin’ireo zavatra maro be mandona ny tany, raha tsy teo i Jupiter. Mbola mandray soa avy amin’ny volana koa ny tanintsika. Tsy vitan’ny hoe tsara tarehy sy manazava ny alina fotsiny ny volana, fa izy koa no mihazona ny tany hitongilana. Io fitongilanana io no mahatonga antsika hanana fizaran-taona samihafa, izay tena ilain’ny zavamananaina.
11. Hazavao ny fomba iarovan’ny atmosfera ny tany.
11 Miseho amin’ny fomba namoronana ny tany ny hery namoronan’i Jehovah. Diniho ny atmosfera, ilay ampinga miaro ny tany. Mamoaka taratra mahasalama sy mahafaty ny masoandro. Mivadika ho ôzônina ny oksizenina, rehefa miantraika eo amin’ny atmosfera ambony ilay taratra mahafaty. Io ôzônina miforona io indray kosa no mitelina ny ankamaroan’ireo taratra mahafaty ireo. Natao ho afaka hiaro ny tenany tokoa ny tany!
12. Nahoana ny tsingerin’ny rano no mampiharihary ny hery namoronan’i Jehovah?
12 Lafiny iray monja amin’ny atmosfera izany. Ny atmosfera dia fifangaroana gaza mety tsara mba hahavelona ireo zavamananaina eto an-tany. Anisan’ny zava-mahagaga aminy ny tsingerin’ny rano. Mamadika ranomasina 400 000 kilaometatra toratelo isan-taona mba ho etona ny masoandro. Mitambatra ho rahona ireny rano ireny, ary avezivezin’ny rivotry ny atmosfera. Manjary madio indray ireny rano ireny avy eo, ka milatsaka ho orana sy orampanala ary ranomandry, mba hameno indray ny tahirin-dranon’ny tany. Izao indrindra no ilazan’ny Mpitoriteny 1:7 izany: “Ny renirano rehetra dia samy mankamin’ny ranomasina, nefa tsy tondraka ny ranomasina; any amin’izay falehan’ny renirano ihany no iverenany indray.” I Jehovah ihany no afaka mampiverina hatrany izany tsingerina izany.
13. Inona no porofon’ny herin’ilay Mpamorona hitantsika eo amin’ny zavamaniry sy ny tany?
13 Miharihary eo amin’ny zavamananaina rehetra ny herin’ilay Mpamorona: manomboka amin’ny hazo séquoia avo noho ny trano misy rihana 29, ka hatramin’ny zavamaniry tena bitika any an-dranomasina, izay manome ny ankamaroan’ny oksizenina fohintsika. Feno zavamananaina, na dia ny tany hitsahintsika aza: ao ny kankana, holatra, sy bibikely hafa miara-miasa tsara mba hampitombo ny zavamaniry.
14. Inona no hery misy na dia ao anatin’ny ataoma kely aza?
14 I Jehovah tokoa no “Ilay nanao ny tany tamin’ny heriny.” (Jeremia 10:12) Miharihary eo amin’ny zavatra madinika indrindra noforoniny ny heriny. Mbola tsy matevina noho ny volon’olombelona na dia ny ataoma iray tapitrisa atambatambatra aza. Ary na dia hitarina hitovy haavo amin’ny trano misy rihana 13 aza ny ataoma iray, dia mbola zara raha hitovy amin’ny poti-tsira voatoto iray eo amin’ny rihana fahenina ny haben’ny atiny. Avy ao amin’io atiny tena faran’izay kely io anefa no ipoiran’ny hery tena lehibe amin’ny fipoahana niokleary!
“Izay rehetra manam-pofonaina”
15. Inona no tian’i Jehovah hampianarina an’i Joba, rehefa noresahiny taminy ny momba ireo bibidia samihafa?
15 Anisan’ny tena manaporofo ny hery namoronan’i Jehovah ny habetsahan’ny biby eto an-tany. Mitanisa an’ireo zavatra midera an’i Jehovah ny Salamo 148, ary tononin’ny andininy faha-10 ny “bibi-dia sy ny biby fiompy rehetra.” Niresaka tamin’i Joba i Jehovah indray mandeha, mba hampisehoana ny antony tokony hatahorantsika an’ilay Mpamorona. Noresahiny ny momba ny liona, zebra, ombidia, behemota (lalomena), ary leviatana (mamba). Inona no tiany hambara? Raha talanjona ny olona manoloana ireny zavaboary matanjaka sy mampahatahotra ary tsy voafehiny ireny, inona no tokony ho tsapany momba ny Mpamorona?—Joba toko 38-41.
16. Inona no mampiaiky volana momba ny sasany amin’ireo vorona noforonin’i Jehovah?
16 Miresaka momba ny “voro-manidina” koa ny Salamo 148:10. Misy karazany be dia be izy ireny! Noresahin’i Jehovah tamin’i Joba fa ‘ihomehezan’ny ostritsa ny soavaly sy ny mpitaingina azy.’ Marina fa tsy manidina io vorona manana haavo 2,50 metatra io. Afaka mihazakazaka 65 kilaometatra isan’ora kosa anefa izy, ka mahavita 4,5 metatra indray mandingana! (Joba 39:13, 18) Saika manidina eny ambony ranomasina foana kosa ny lohovava. Mahatratra telo metatra ny halavan’ny elany roa mivelatra. Afaka misidina mandritra ny ora maro izy, nefa tsy mila mikopaka elatra akory. Ny kôlibria indray no vorona kely indrindra, satria dimy santimetatra monja no halavany. Afaka mikopaka elatra im-80 isan-tsegondra izy! Afaka manidina tsy mihetsika eo amin’ny toerany, toy ny helikoptera, io vorona hafakely io, ary afaka manidina miverina mihitsy aza.
17. Manao ahoana ny haben’ny trozona manga, ary inona no tsapantsika rehefa mandinika ny biby noforonin’i Jehovah isika?
17 Milaza ny Salamo 148:7 fa midera an’i Jehovah, na dia ireo “dragona”, na biby lehibe, any an-dranomasina, aza. Heverina ho ny biby lehibe indrindra ny trozona manga. Toy ny “dragona” tokoa izy io, satria mety hahatratra 30 metatra, na mihoatra noho izany, ny halavany. Mety hitovy lanja amin’ny elefanta lehibe 30 izy. Ny lelany fotsiny dia efa mitovy lanja amin’ny elefanta iray. Mitovy habe amin’ny fiara madinika ny fony. Intsivy isa-minitra monja io fony io no mitepo, fa tsy toy ny an’ny kôlibria, izay mitepo in-1 200 isa-minitra. Tena lehibe ny lalandrany sasany, ka mety ho afaka handady ao anatiny ny ankizy iray. Tena manosika antsika tokoa ny fontsika mba hamerina ny fampirisihan’ny Salamo hoe: “Aoka izay rehetra manam-pofonaina samy hidera an’i Jehovah.”—Salamo 150:6.
Fianarana avy amin’ny hery namoronan’i Jehovah
18, 19. Manao ahoana ny habetsahan’ny karazan’ireo zavamananaina noforonin’i Jehovah eto an-tany, ary inona no ampianarin’izany antsika momba ny zony hitondra?
18 Inona no ianarantsika avy amin’ny fampiasan’i Jehovah ny heriny mba hamoronana? Gaga tanteraka isika mahita ny karazan’ireo zavaboariny. Hoy ny mpanao salamo: “Endrey ny hamaroan’ny asanao, Jehovah ô! ... henika ny zavatra nataonao ny tany.” (Salamo 104:24) Tena marina izany! Nahita zavamananaina maherin’ny iray tapitrisa ny manam-pahaizana, ary samy hafa kosa ny hevitra momba ny isany, satria misy milaza hoe mety hisy 10 na 30 tapitrisa, na betsaka noho izany. Mety tsy hahita zavatra hatao sary intsony ny mpanao hoso-doko, indraindray. Tsy mety ritra kosa anefa ny herin’i Jehovah hamoronana zavatra vaovao.
19 Mampianatra antsika momba ny zon’i Jehovah hitondra ny hery namoronany. Ilay teny hoe “Mpamorona” mihitsy dia efa mampisaraka an’i Jehovah amin’ny zavatra hafa rehetra, satria “zavaboariny” daholo ireny. Na i Jesosy Zanany lahitokana, ilay nantsoina hoe “mpità-marika”, aza dia tsy antsoin’ny Baiboly mihitsy hoe Mpamorona, na Mpiara-mamorona. (Ohabolana 8:30; Matio 19:4) Antsoina kosa hoe “Lahimatoa talohan’izao zavatra ary rehetra izao” izy. (Kolosiana 1:15) I Jehovah irery no manana ny fahefana ho mpitondra an’izao rehetra izao, satria izy no Mpamorona.—Romana 1:20; Apokalypsy 4:11.
20. Inona no dikan’ilay hoe nitsahatra i Jehovah, taorian’ny nahavitany ny famoronana teto an-tany?
20 Efa tsy mampiasa ny heriny mba hamoronana intsony ve i Jehovah? Milaza tokoa ny Baiboly fa “nitsahatra tamin’ny andro fahafito Izy tamin’ny asany rehetra izay efa nataony.” (Genesisy 2:2) Nilaza ny apostoly Paoly fa an’arivo taona io “andro” fahafito io, satria mbola tao anatin’io andro io no niainany. (Hebreo 4:3-6) Milaza ve anefa ilay hoe “nitsahatra” fa tsy manao na inona na inona intsony i Jehovah? Tsia, satria miasa foana izy. (Salamo 92:4; Jaona 5:17) Midika fotsiny àry izany fa hoe nitsahatra tsy namorona zavatra eto an-tany intsony izy. Tsy mijanona mihitsy kosa ilay asa ataony hanatanterahana ny fikasany. Anisan’izany ny fanomezana tsindrimandry olona hanoratra ny Soratra Masina. Anisan’ny asany mihitsy aza ny famoronana “olom-baovao”, na zavatra noforonina vaovao, horesahintsika ao amin’ny Toko 19.—2 Korintiana 5:17.
21. Inona no ho vokatry ny hery namoronan’i Jehovah eo amin’ny olona, mandritra ny mandrakizay?
21 Ho afaka hiteny i Jehovah, rehefa tapitra ny andro fitsaharany, fa “tsara indrindra” ny asany rehetra, tsy misy hafa amin’ny nolazainy taorian’ny andro famoronana fahenina. (Genesisy 1:31) Mbola ho hita eo ihany ny fomba tiany hampiasana ny heriny tsy misy fetra mba hamoronana. Na ahoana na ahoana anefa, dia azontsika antoka fa mbola ho talanjona isika hahita ny fomba hampiasany ny heriny mba hamoronana. Mbola hiana-javatra betsaka momba ny famoronan’i Jehovah isika, mandritra ny mandrakizay. (Mpitoriteny 3:11) Hatahotra kokoa an’ilay Mpamorona Lehibe antsika isika, arakaraka ny ahafantarantsika azy, ary ho akaiky azy kokoa isika.
^ feh. 2 Indro misy fanoharana hanazavana izany: Raha mandeha fiara amin’izany halavirana izany ianao, dia ho zato taona mahery vao ho tonga, na dia atao aza hoe mandeha 160 kilaometatra isan’ora ianao, ary mandeha andro aman’alina!
^ feh. 6 Misy milaza fa tsy maintsy ho efa nampiasa teleskaopy (masolavitra) tsotsotra ny olona tamin’ny andron’ny Baiboly. Mihevitra mantsy izy ireo hoe ‘Ahoana no nahafantaran’ny olona tamin’izany fa tsy voaisan’ny olona ny kintana?’ Manambany an’i Jehovah, ilay Niavian’ny Baiboly, ny hevitra toy izany.—2 Timoty 3:16.
^ feh. 7 Andeha hatao hoe hanisa kintana 100 000 tapitrisa ianao. Afaka 3 171 taona ianao vao hahisa azy rehetra, raha afaka manisa iray isan-tsegondra, ary tsy mitsahatra andro aman’alina!
Salamo 8:3-9 Nahoana no mampianatra antsika hanetry tena ny zavaboarin’i Jehovah?
Salamo 19:1-6 Manosika antsika hanao inona ny hery namoronan’i Jehovah, ary nahoana?
Matio 6:25-34 Nahoana no manampy antsika tsy hanahy be loatra sy hahita ny zava-dehibe kokoa ny fandinihana ny hery namoronan’i Jehovah?
Asan’ny Apostoly 17:22-31 Nahoana ny fampiasan’i Jehovah ny heriny mba hamoronana no mampianatra antsika fa tsy mety ny manompo sampy ary tsy lavitra antsika Andriamanitra?
Ho hitanao ato hoe ahoana no azonao anatanjahana ny finoanao sy anampiana ny olona hahafantatra ny marina momba ny Mpamorona.